Ingaphakathi ngesitayela saseVenetian
Ungasho ngokuphepha ukuthi isitayela saseVenetian "i-fusion" yezitayela eziningana ekwakhiweni kwangaphakathi. Lokhu kuhlanganiswa kwemibono, imibala, izinto zokwakha, kodwa nama-eras ahlukene empilweni yaseVenice. Kubaluleke kakhulu ukuthi isitayela saseVenice endlini yakho sihlanganisa imigqa yakudala, izakhi eziyingqayizivele zokwakha, ubukeka obuhle, imibala ehloniphekile nezinto zokunethezeka. Umbala wombala obanzi walesi sitayela yilokho okuwuphawu, ukuhlukanisa phakathi kwezinye izitayela. Emhlobiso walesi singaphakathi, ungasebenzisa noma yikuphi imibala eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka neyombala, ehlanganiswa, okokuqala, ngamanzi. Ngaphezu kwabo, ukusetshenziswa kwe-red, burgundy, i-shades yegolide iyamukelwa.
Lesi sitayela sithandwa kakhulu namuhla kulabo bantu abasebenza ekwakheni kwendlu yangaphakathi. Izinto zokunethezeka, izinto ezicebile, imibala ecebile, ifenisha enhle nokuziqhenya, isikhala esandisiwe - lezi yizici ezikhethekile ngesitayela saseVenetian ezingaphakathi. Izimpande zawo zibuyele emuva ekhulwini le-15-16, lapho iVenice ibona khona isikhathi sayo futhi yazama ukukhombisa ingcebo yayo, amandla kanye nethuba elibanzi lemali. Isitayela saseVenetian ekwakhiweni kwezakhiwo nokwakheka kwezinto kusukela ekuhlotshaneni nokunethezeka nokucebile, yingakho uma uyisebenzisa emklamo wangaphakathi wendlu yakho, kufanele ulungele ukulandela amasiko futhi usebenzise izinto zokwakha ezibizayo kuphela, ifenisha ye-chic kanye nezakhi zokuklama okunethezeka.
Izici zesitayela saseVenetian
Isitayela ngasinye esakhiweni sangaphakathi sinezici zayo ezibonakalayo ezihlukanisa lesi sitayela futhi zihlukanise nabanye. Isitayela saseVenetian sisonke ngokwemidwebo nemibala esetshenzisiwe, kodwa inezinye izici eziningi nezici ezihlukile, phakathi kwazo izidingo ezithile izinto zokwakha, izindonga nezindonga, kanye nokukhona kwezici ezithile zokuhlobisa. Uma sikhuluma ngezici eziyisisekelo isitayela saseVenetian esinalo, lezi zici ezilandelayo zingahlobene nazo:
Lesi sitayela sihle ngamakamelo amakhulu kuphela - izindlu ezinkulu namafulethi.
Izinto ezisemqoka okufanele zisetshenziswe lapho ukuhlobisa indlu ngesitayela seVivecian yi-marble, i-ceramics, i-mahogany, nezinye izakhi zokuhlobisa nezinto zokwakha, okushaya nje umcebo. Ukusetshenziswa okulungile kwe-plaster yaseVenetian.
Umbala wombala wezangaphakathi, isici salesi sitayela yimibala emibala ejulile necebile ekusetshenzisweni kwegolide.
Ifenisha kufanele ibe yinto enamandla, eqoshiwe, kuphela ezintweni ezibiza izindalo zemvelo, isibonelo, ezivela enkuni yekhwalithi, ezakhiwe ngezinto zokunethezeka - i-velvet noma isilikhi.
Ngezindonga ungasebenzisa kuphela i-plaster yaseVenetian, kodwa futhi iphepha lodonga lenziwe ngesitayela seBaroque.
Esikhathini esingaphakathi kwezakhiwo zezibuko zaseVenetian kumele zisetshenziswe emafreyimini, izibani zezibani noma ama-candelabra antique, ama-tapestries, izibani ze-candle ezibizayo ezenziwe nge-glass Murano.
Ukusetshenziswa komdwebo ngaphakathi kwendlu yokugezela - lena enye yezinkomba eziyinhloko zesitayela saseVenetian.
Amapulangwe kufanele abe ngamatshe, mhlawumbe nge-marble (ungasebenzisa izinto zokuhlobisa) - lokhu kungenye yezici eziyinhloko zalesi sitayela.
Isitayela saseVenetian sihlanganisa ezinye izitayela eziningana - eziyingqayizivele, zaseYurophu, eziBaroque, zesiFulentshi, zamaGothic nezinye izinto.
Isitayela saseVenetian egumbini lokuphumula
Lesi sitayela kufanele sishaywe ngokufanele ekamelweni elikhulu lokulala elikhulu futhi elihle ekhaya. Imibala engasetshenziswa ihluke ngokuphelele, into eyinhloko ukuthi banika igumbi ukubukeka okucebile. Ekamelweni lokulala ungakwazi ukubeka i-marble noma i-ceramic, bese uyihlobisa izindonga nge-plaster yaseVenetian. Ngokuvamile, izindonga zesitayela saseVenetian zisetshenziswa iphepha lodonga noma iphepha lodonga ngamaphethini kule ndlela. Kusuka ifenisha, ama-sofas ayenziwe ngamapulangwe emvelo ngamagilane anqanyuliwe kanye neminyango, okuyizinto ezenziwe ngamathambo afanele-isilikhi, i-velvet iyadingeka. Kanti futhi egumbini lokuphumula singama iKhabhinethi enkulu evela emthini wemvelo, ngamapulanka aqoshiwe kanye nemigqomo. Ingaphakathi laseVenetian ekamelweni lokuphumula lihambisana kahle ne-tapestries enokuzithokozisa ngokukhiqizwa kwezithombe zabadwebi base-Italy. Qinisekisa ukuthi ulenga amakhethini egumbini lokuphumula - lezi zingaba yizici ezihlukahlukene zakudala kanye namakhethini aseVenetian aneziqondiso eziqondile. Phakathi kwemininingwane kanye nezakhi ezincane zengaphakathi kungabizwa ngokuthi izitsha ezihamba phambili, izitebhisi, i-antique iwashi yegolide, i-antique candelabra, ama-masks aseVenetian, i-glassware - konke lokhu kuzokwenzela i-Venetian yangaphakathi futhi kusondelane nalesi sikhathi.
Isitayela saseVenetian ekamelweni lokulala
Igumbi le-Venetian lingabonakala likhanya, futhi lingenamaphuzu amancane. Ifenisha enkulu yendlu yangaphakathi yokulala, ngokungangabazeki, umbhede. Kumelwe kwenziwe ngezinkuni zemvelo, imidwebo emikhulu kanye nekhanda lokubamba. Umphumela owengeziwe wezangaphakathi unikeza umbhede wezintambo nezingubo zokulala, okuhambisana nesithombe segumbi lonke. Qinisekisa ukugcina ithrekhi yazo zonke izakhi zomklamo ezihlanganiswe ngokuvumelana nomunye nomunye, futhi umbala we-bedspread ufananiswe nesitayela sekamelo lokulala. Futhi ekamelweni lokulala ungabeka isifuba se-antique esenziwe ngezinkuni zemvelo, izitshalo ezimbalwa ezinamathele, futhi ubeke isikrini esikhulu endaweni ephathekayo. I-shayali eyakhiwe ngokujwayelekile ingakwazi "ukungena" ngaphakathi, ngakho-ke ingeza izakhi ezimbalwa ezenziwe ngethusi futhi zingene ekamelweni lokulala. Ngokuvamile, isitayela seVenetian ekamelweni lokulala - lokhu kuyisethi yamathambo, izimbozo, izibuko, imidwebo kanye nemithunzi ekhanyayo.
Isitayela saseVenetian ekhishini
Ikhishi lesitayela saseVenetian lifana kakhulu ne-classical cuisine, kodwa lapha i-fantasy yomklami ingaqhubeka kakhulu. Into esemqoka ekhishini elinjalo kufanele libe yithebula - elikhulu, elihle, elikhulu futhi elenziwe njalo ngezinkuni zemvelo. Itafula kufanele libe nezihlalo ezenziwe ngokhuni ezine-highholstery eziphakeme kakhulu nezindleko. Ifenisha enhle nensizakalo iyisici esiqakathekileko sesitayela seChertavecian ekhishini. Ukukhanya nokukhululeka kuyisiqu esiyinhloko sokudla kwesitayela seWvenensian, futhi isilikhi ne-velvet yizinto eziyinhloko zokwakha izinto ezingasetshenziswa ukudala isitayela se-cuisine. Ama-Windows ekhishini kufanele abe phezulu, amakhethini amukelekile kanye nama-cornice amahle amakhulu. Amadivaysi okukhanyisa ekhishini angenziwa ngeglasi, afana noMurano. Kubaluleke kakhulu ukugcina ukuvumelana ngokuhlanganiswa kwemibala, futhi nokugcina isitayela, nakuba ikhona yonke indawo futhi ihlanganisa izinkomba eziningana, kodwa nayo inezici zayo ezihlukile.
Isitayela saseVenetian endlini yokugezela
Esigumbini sokugezela kungcono ukwenza izindonga nge-blue and blue shades, futhi indlu yokugezela kufanele ibe nefomu elingavamile, umbala nokuma. Kungaba ukugeza okuzungezile noma kwe-oval nomthunzi wokwakha. Amadonga nokulala, njengendlela yokukhetha, ingavezwa nge-mosaic - ngoba lokhu kusebenzisa yonke ingqondo yakho. I-plumbing ingcono kunombala wegolide. Ifenisha endlini yokugezela kumele ibe nkulu ngokwanele futhi yenziwe ngezinto zokwakha zemvelo.
Amandla nokuvumelana kwekhaya elihle
Amakhethini aseJapan, iphaneli izimpumputhe
Indlela yokuhlomisa igumbi lezingane endlini
Isobho sehlobo ngezithelo
Owesifazane uyinyoka, ngubani?
U-Olga Buzova wenza iplastiki ebusweni, isithombe
Indima yabazali empilweni yezingane
Imicabango evamile mayelana nesisu
Ukukhanya kwempumalanga: isikhumba esingenasici ne-Dior iqhwa Bloom Perfect
Wedding in style Hollywood
I-Course imiphumela nge-Hula Hup
Ukubeletha nobisi lwabesifazane